Global Voices teny Malagasy · Jolay 2018
Tantara misongadina tamin'ny Jolay 2018
Ao Bahraina, sady an-tambajotra no tsia, naneho ny firaisankinany amin'ireo Ejiptiana ny mponina, tamin'ny fanaovana hetsi-panoherana tao amin'ny Masoivoho Ejitpiana tamin'ny 4 Febroary. Na dia tena hetsika firaisankina tamin'ny ankapobeny aza ilay fivoriana, fahafahana ho mba hanehoan'ireo mpanohitra ao Bahrain izay manahirana azy manokana ilay hetsi-panoherana --izay nekena niaraka tamin'ny...
Miala Tsiny Fa Tsy Miteny Anglisy Aho. Sary no Teniko
Amerika Avaratra31 Jolay 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Jolay 2018
Nahoana No Asehon'ny Faritanin'i Bamyan Ny Tsara Indrindra Any Afganistàna ?
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Jolay 2018
"Hafatra mazava no omen'ity sary ity : fiarovana, fahamendrehana ary fitovian'ny lahy sy ny vavy. Maniry ny fisian'ny fihaonana tahaka izao any amin'ny faritany rehetra aho."
Pakistana 31 Jolay 2018
Foiben-toeran'ny Masoivohon'i Kurram ao amin'ny Faritra ara-poko tantanana amin'ny fomba federaly ao Pakistana i Parachinar. Ankehitriny, azon'ireo talibana mpikomy ilay tanàna izay hampanjakany ny tahotra ka hanereny ny mponina hiala ao.
Azerbaijan : Miverina amin'ilay famonoana nitranga tao amin'ny Ivontoeran'ny Solitany
Azerbaijan 31 Jolay 2018
''Tena ela fiparitahana [tao Azerbaijan] ny vaovao mikasika ilay loza nitranga tao Bakou tamin'ny faran'ny volana lasa teo, ary fanontaniana maro no mbola tsy misy valiny. ... Azo antoka fa tamin'ny marainan'ny 30 aprily 2009, olona 13 no maty nandritra ny fitifirana nahafaty tao amin'ny Ivontoeran'ny solintany azery (Azerbaidjan State Oil Academy)..
Nikarakara atrikasa roa hafa ny volana Jona 2009 ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices 'Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media' (EWAMT). Ankoatra ny fampianarana ireo mpandray anjara ny fomba famahanana bilaogy dia nofanina tamin'ny fomba fampiasana ny bilaoginy amin'ny fanompoana ny vondrom-piarahamoniny izy ireo.